दसैंपछिको सामान्य जीवन - सन्दर्भ - साप्ताहिक
दसैंपछिको सामान्य जीवन
पूर्णिमासँगै दसैं बिदा पनि सकिएको छ । दसैं नआउँदासम्म दसैं कहिले आइदेओस् जस्तो हुन्थ्यो । मध्यदसैंभन्दा बरु दसैं आउन आँटेको समय बढी उल्लासपूर्ण हुन्छ, किनभने बिदा टन्नै हुन्छ र यो गरौंला त्यो गरौंला भनेर योजना बनाइन्छ । बिदा आउँदा कुन्नि कतातिर रनभुल्लमा परिन्छ, सोचेका मध्ये धेरै काम गर्नै पाइँदैन । बिदा सकिएपछि ख्याल आउँछ, धेरै कुरा गर्न पाइएन, अब पुरानै ढर्राको जीवनशैलीमा जान हिचकिचाहट हुन्छ, बिर्सिएको जिम्मेवारी पुन: निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । खुसीयाली, परिवार एवं रमाइलो सुखानुभूतिबाट अकस्मात् पूर्वावस्थाको जीवनमा फर्कन निश्चय पनि गाह्रो हुन्छ । यसलाई पोस्ट भ्याकेसन ब्लुज अर्थात् बिदापछिको नैराश्यता भनिन्छ, जुन स्वाभाविक मानवीय मनोवृत्ति हो ।
बिदा वास्तवमै सपनाजस्तो हुन्छ, रोमाञ्चक तर क्षणिक । नियमित घरबाट कार्यालय जाने अनि काम सकेर घर आउने नितान्त रोबोटजस्तो जिन्दगीका लागि बिदा भनेको अपत्यारिलो र अनुमान लगाउन नसकिने नै हुन्छ, किनभने एक दिनमा पहिलेजस्तो कुनै एक काम मात्र हामी गरी भ्याउँदैनौ । हामी एक ठाउँ मात्र जाने होइनौं । मन लागेको धेरै कुरा गरिन्छ, अनि मन लागेका धेरै ठाउँ एकै दिन पनि पुगिन्छ । नयाँ–पुराना साथीभाइ अनि इष्टमित्रसँगको भेटघाट, नयाँ पहिरन एवं सौख अजमाउने समय बिदा नै हो । यस्तो समयबाट ह्वात्त पुरानै व्यस्ततामा फर्कंदा जुन किसिमको खिन्नता हुन्छ त्यो खिन्नतालाई कसरी कम गरेर आफ्नो क्षमतालाई ह्रास आउन नदिने त ?
बिदा सक्किनासाथ सरसफाइ गर्नुपर्ने चिज धेरै हुन्छन्, त्यसैले बिदा सुरु हुनुअघि नै सरसफाइको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । सिरकको खोलदेखि लिएर कार्पेट, तन्ना, पर्दा, टावेल आदि–इत्यादि पहिल्यै धोएर राख्नुहोस् ताकि बिदा सक्किनासाथ सरसफाइको चपेटाबाट मुक्त भइनेछ । किचेनदेखि करेसाबारी र बाथरुम पनि सफा गर्नुहोस् । बिदाबाट फर्किसकेपछिको पहिलो काम भनेको लुगा धुनु नै हो । दसैं बिदामा यता–उता हिँड्दा मैलिएका तथा राता अबिर लागेका कपडाहरू धुनुहोस् ।
बिदाको अन्तिम दिन रमाइलो वा घुमघाम नगर्नुहोस्, किनभने आफ्नो पूर्वरुटिनमा फर्कन एक दिन घरमै बिताउनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय जानका लागि आवश्यक चिज–वस्तुहरू ठीक पार्नुहोस् । बिदा सक्किनासाथ क्यालेन्डर हेर्नुहोस्, अब नजिकै के–के मुख्य कार्य–योजना छन् । जस्तै— अफिसको कुनै महत्वपूर्ण बैठक वा कुनै साथीको जन्मदिन पार्टी, फोन, पानी वा इन्टरनेटको बिल तिर्नुपर्ने वा कुनै पारिवारिक जमघट ।
अफिस जाँदा एक घण्टाअघि नै पुग्नुहोस् र नगरिनहुने काम फत्ते गर्न अग्रसर हुनुहोस् । अरू सहकर्मि आएर दसैं कस्तो भयो, के भयो भनेर होहल्ला हुनुअघि नै आफ्नो अत्यावश्यक काम सकिसक्नुपर्छ । जस्तै, इमेल वा चिठीहरू पढ्ने, रिप्लाई गर्ने, सामान वा मेसिनहरू चल्छन्/चल्दैनन् जाँच–पड्ताल गर्ने, बिजुली बत्तीहरूको अवस्थिति बुझ्ने, सरसफाइ तथा पिउने पानीको सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराउने वा आफैंले गर्ने । काममा फर्किएपछि लगत्तै आउने बिदालाई खासै कुनै तनाव नलिइ बिताउने, जस्तै— टिभी हेरेर, सुतेर वा पढेर ।
गुड नाइट पुस्तकका लेखक डा. माइकल ब्रुइसले भनेका छन्, विशेष गरेर चाडबाडलगत्तैको समस्या सुताइ, मादक पदार्थ र बालबच्चाबीचको अन्तरनिहित सम्बन्ध राम्रोसँग पहिचान गर्न नसक्नाले सिर्जना हुन्छ । त्यही भएर बिदाको समय बाँड्दा, परिवारलाई, आफ्नो निन्द्रालाई र मनोरन्जन तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनैपर्छ । मादक पदार्थले चाँडो निदाउन त सहयोग गर्छ तर गहिरो निन्द्रा प्राप्त गर्न दिँदैन । त्यसैले निद्रा अपुग हुन्छ । बिदामा हरेक अर्को दिन नयाँ योजना हुने भएकाले मादक पदार्थको सेवनबाट त्यस्तो योजना बिथोलिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ । ह्याङ ओभरले स्वास्थ्य पनि गडबड हुन पुग्छ, तसर्थ स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन नदिन रक्सी–चुरोट नखाऔं र सकेसम्म दैनिक कम्तीमा २५ मिनेट योग गरौं ।
भनाइ नै छ, जो आफ्नो काममा मुस्कुराउँछन् र हाँस्छन् उनीहरू आफ्नो पेसामा बढी रमाउँछन् । खुसी आफूले गर्ने काममै खोज्ने हो, नकि फेसबुके ट्रोल वा मेन्ज रुमका पोस्टहरूमा । हो, खुसी मनको एउटा मीठो केक हो जुन जुनसुकै समयमा आफ्नो इच्छाअनुसार तयार गर्न सकिन्छ । तपाईंको इच्छा नै खुसी ब्युँताउने इन्धन हो ।
दसैंमा अन्टीले वा सासूले पकाएको मीठो परिकार सम्झनुहोस् र त्यसको रेसिपी घरमै तयार गर्नुहोस् । यो गर्दागर्दै तपाईंले बिदाको एउटा राम्रो पक्षलाई त तपाईंले आफ्नो जीवनमा समाहित गरिसक्नुभयो । अब चाहेको समयमा त्यो रेसिपी तपाईंको बायाँ हातको खेल हो ।
बिदाभर अटेस–मटेस भएर जम्मा भएका कामहरू सुरुवात गर्नै अल्छी लागेर आएको बेलामा आफ्नो नजिकैको कसैलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुहोस्, सँगै गफ गर्दागर्दै काम अघि बढेको तपाईंलाई पत्तै हुनेछैन, तर साथीको यो गुन कुनै न समय चुकाउने प्रण पनि गर्नुहोस् ।
बिदाका अन्तिम दिनहरूमा गरिष्ठ खाना नखानुहोस् । सधैंजस्तो खाएको मासु, प्रोटिन वा मसलायुक्त परिकारले पाचन प्रणाली पहिले नै दबाबमा छ, अब त्यसलाई पनि आराम दिनुहोस् । घरमै तयार गरिएको फाइबर वा सब्जीको सादा खाना खानुहोस् । पानी प्रशस्त पिउनुहोस् र सुतेर शरीरलाई आराम गराउनुहोस् ।
काममा फर्किएकै दिन महत्वपूर्ण बैठक वा कामहरू नगर्नुहोस्, नगराउन भन्नुहोस् । यस्ता काम गर्न तपाईं अपडेट हुनुभएकै छैन भने कसरी तपाईंले केही दिन सक्नुहुन्छ ? त्यसै गरी अफिसका सुरुका दिनमा निर्धारित समयभन्दा बढी काम नगर्नुहोस्, धेरै घण्टा काम गरेर थकित हुनुभन्दा प्रत्येक घण्टा गरिने कामलाई बढी अर्थपूर्ण बनाउनुहोस् ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानसिक अभ्यास हो । बिदाको रमाइलो क्षणलाई जीवनको एउटा अभूतपूर्व सिकाइका रूपमा लिनुपर्छ । तीता क्षणले नयाँ कुरा सिकाउँछ भने मीठा क्षणले उत्साह भर्छ । खुसी हुनु र निराश हुनु मानवीय जीवनको अपरिहार्य सत्य भएकाले दसैं बिदाबाट प्राप्त अनुभूतिहरूलाई जीवनको अमूल्य खुड्किलो हो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अब पुरानो रुटिनबाट दिक्दार हुनुभन्दा बिदाको समयमा भएको सम्झनाबाट जाँगर र खुसी खोज्नुपर्छ अनि त्यसैगरी अर्को खुसीयालीका लागि पनि मानसिकता बनाउनुपर्छ ।
कुरा बुझ्नो भो त
विश्वकप दर्शन नियमावली–२०१८ असार २४, २०७५